UMASIPALA WASEMANDENI NOHLELO LOKUFUKULA AMABHIZINISI AMANCANE – Sivubela intuthuko Newspaper
UMASIPALA WASEMANDENI NOHLELO LOKUFUKULA AMABHIZINISI AMANCANE
Esithombeni : Khansela Thabani Mdlalose oyiMeya yoMkhandlu waseMandeni ohlose ukulekelela amabhizinisi amancane akule ndawo ukuze angafadabali
UMASIPALA waseMandeni, oGwini olusenyakatho yeKwaZulu Natal usembhidlangweni wokufukula amabhizinisi amancane akule ndawo. Lokhu kuvezwe yilo Masipala kwisitatimende obukade usithumelele abezinda.
Kulesi sitatimende lo Masipala oholwa yiMeya, uKhansela Thabani MdlaloseI uveza ukuzibophezela kwawo ngenhloso yokufukula osomabhizinisi bendawo. Ukukhahlamezeka kwamanye amabhizinisi okubangelwe wukuntengantenga komnotho ngesinye sezizathu esiholele ekutheni uMasipala waseMandeni ukhethe ukufaka igxalaba ngenhloso yokuhlenga amabhizinisi akule ndawo.
Kwisitatiminde kuhlalukile ukuthi lolu hlelo lokuhlengwa kwamabhizinisi amancane lethiwe elokuthi yiMayoral Covid-19 Business Relief. UMasipala ukuvezile ukuthi udinga labo bantu abanohlelo oluhlabahlosile lokukhulisa amabhizinisi abo. Abazophumelela bazohlomula ngesamba semali esingu-R50 000 kanye nezinye izidingongqangi eziwumgogodla wokusebenza kwebhizinisi.
Osomabhizinisi abagxile kweZolimi kanye nabagxile kwezokuVakasha nabo bayanxuswa ukuba bafake izicelo zabo. Kukhuthazwa nabesifazane ukuba bafake izicelo. Abafuna ulwazi olugcwele ngalokhu bangangena kwiWebsite yalo Masipala ethi: www.mandeni.gov.za. Noma bathinte uNkz Zama Mnqayi kule nombolo: 032456 8272.